▷ Laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ, nke ị ga-azụta na 2022?
N'ime nhọrọ dịgasị iche iche nke ngwaahịa dị na ahịa, anyị nwere ụdị laptọọpụ nke ọtụtụ ndị na-amaghị. Ọ bụ banyere akwụkwọ ndetu na-enweghị sistemụ arụmọrụ. Dị ka aha ahụ na-egosi, kọmpụta ndị a enweghị sistemụ arụmọrụ. Ya mere, ha bụ nhọrọ nke na-enye onye ọrụ ọtụtụ nhazi na nhazi ohere. Ọ bụ ezie na ha bụkwa nhọrọ echekwabara maka ndị ọrụ nwere ihe ọmụma karịa.
Ya mere, enwere ike ịnwe ndị ọrụ ole na ole nwere mmasị ịzụrụ ụdị ụdị a. Mgbe ahụ, anyị na-ahapụ gị nhọrọ nke laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ nke anyị na-edo onwe ha n'okpuru a tụnyere ndị kasị mma ụdị.
1 Laptọọpụ sistemụ anaghị arụ ọrụ kacha egosipụta
2 Laptọọpụ kacha mma na-enweghị sistemụ arụmọrụ
3 Uru nke ịzụrụ laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
3.2 Nhazi na nhazi
3.3 Nnwere onwe
4 Ụdị na-ere laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
5 Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m zụtara laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ?
6 Kedu OS ị ga-etinye na laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ?
6.3 ndị ọzọ
7 Otu esi etinye OS na kọmpụta na-enweghị sistemụ arụmọrụ
8 Enwere m ike ịzụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ wee jụọ onye ọrụ nka ka ọ wụnye ya?
9 Ọ bara uru ịzụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Laptọọpụ sistemụ anaghị arụ ọrụ kacha egosipụta
Nke mbụ anyị na-ahapụ gị na nke a ntụnyere nke laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ nke anyị na-egosi gị nkọwa kachasị mkpa nke ụdị kachasị dị ịrịba ama na ahịa. N'ụzọ dị otú a ị nwere ike nweta echiche dị ka nke ọ bụla n'ime ụdị ndị a. Mgbe tebụl ahụ gasịrị, anyị na-aga n'ihu na-eme nyocha dị omimi nke nke ọ bụla n'ime ha.
ASUS ROG G713IE-HX011 -…
Laptọọpụ kacha mma na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Ozugbo anyị hụrụ tebụl na nke mbụ njirimara nke laptọọpụ ndị a na-enweghị sistemụ arụmọrụ, ugbu a, anyị na-aga n'ihu nyocha nke ọ bụla n'ime ha. N'ụzọ dị otú a ị nwere ozi ndị ọzọ gbasara ụdị ọ bụla na otu o si arụ ọrụ. Ozi ga-enyere gị aka ịhọrọ nke kacha dabara mkpa gị.
Lenovo bụ ika mebere onwe ya aha na ahịa kọmputa. Ha emeela nnukwu ọrụ ma hapụ anyị ụdị dị mma. Yabụ na ọ bụ ụlọ ọrụ na-ekwe nkwa ịrụ ọrụ nke ọma na kọmputa gị. Na mgbakwunye, a gbakwara ha ume ka ha malite kọmpụta na-enweghị sistemụ arụmọrụ dị ka nke a. Ọ nwere ihuenyo 15,6 inch. Otu nnukwu nha e dị mma maka iri ọdịnaya multimedia yana maka ịrụ ọrụ.
N'ime, ihe nhazi Intel I7-9750HQ na-echere anyị, nke na-enye anyị ọrụ dị mma na obere ike oriri. Nke a bụ Lenovo Model Ọ nwere RAM nke 16 GB. Ikekwe ọnụ ọgụgụ nke pụtara na mgbe ụfọdụ ọ nwere ike ịdị mkpụmkpụ, mana na iji laptọọpụ nkịtị ekwesịghị inwe nsogbu ọ bụla. Banyere nchekwa enweghị nsogbu, ebe anyị nwere 512GB na SSD. Oghere zuru oke iji chekwaa vidiyo, ihe nkiri, onyonyo ma ọ bụ akwụkwọ ọrụ. A ghaghị ikwu na ọ nweghị ihe na-agụ CD / DVD, nkọwa zuru ezu iji buru n'uche.
Ọ bụ kọmputa dị ike nke na-arụ ọrụ ngwa ngwa. Ihe ndị ọrụ ji akpọrọ ihe nke ọma. Ikekwe ọ dị ntakịrị arọ maka nha ya, ebe ọ dị ihe karịrị 2 KG. Ọ bụ ezie na nke a abụghị ihe mgbochi ma a bịa n'ibufe ya nke ọma. Ọzọkwa, a Lenovo nlereanya O nwere sensọ akara mkpịsị aka nke na-enye gị ohere ịnweta kọmputa gị ngwa ngwa. Otu mma, dị ike na nke zuru oke.
N'ebe nke abụọ anyị na-ahụ ihe nlereanya Lenovo ọzọ. Laptọọpụ a nwekwara ihuenyo inch 15,6. A nnukwu na nnọọ vasatail size. Ebe ọ bụ na anyị ga-enwe ike ịhụ ụdị ọ bụla nke ọdịnaya multimedia na-enweghị nsogbu. Na mgbakwunye na inwe ike ịrụ ọrụ na ya na nkasi obi zuru oke. Na mgbakwunye, ọ bụ ihuenyo dị mma nke na-enye ọgwụgwọ dị mma nke agba. Ọzọ RAM bụ 8 GB. Mana nke ahụ ekwesịghị ịbụ nnukwu nsogbu na ọrụ ya.
Nchekwa bụ 500GB. Yabụ na onye ọrụ nwere ohere karịa iji chekwaa ụdị faịlụ niile. Nke a bụ laptọọpụ na-agba ọsọ ọsọ nke dị mma maka ụlọ ọrụ ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ. Ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịrụ ọrụ nhazi, dezie akwụkwọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị na-achọ laptọọpụ ụlọ ọdịnala ọ bụ ezigbo nhọrọ ịtụle.
Ihe nlereanya a nwere ibu nke 2,2 n'arọ, ọ bụghị nke kachasị mfe na ahịa, ọ bụ ezie na ibu a adịghị akpata nsogbu mgbe ị na-ebu kọmputa. O kwesịkwara ịkọwa na laptọọpụ a nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri USB na HDMI. Ihe dị mkpa iburu n'uche mgbe ị na-achọ ịwụnye sistemụ arụmọrụ na ya. Ebe ọ bụ na ọ nwere ike ịbụ njedebe maka onye ọrụ. Laptọọpụ ahụ nwekwara batrị anaghị ewepu ma ọ dị mfe ịgbanwe. Kọmputa zuru oke nke na-arụ ọrụ nke ọma ma na-enye nnukwu uru maka ego.
Nke atọ, anyị na-ahụ ihe nlereanya a site na ika ọzọ nke ọtụtụ n'ime unu maara n'ezie. Ọ bụ laptop na ya ozugbo na-adọrọ uche gaa na ọkụ na keyboard gị. Ihe na-eme ka ọ dị mma maka ndị egwuregwu. Ihuenyo bụ otu nha ka ụdịdị ndị gara aga, ya bụ 15,6 inch. Ọ bụ ezie na ọ pụtara karịsịa maka nchikota RAM na nchekwa n'ime ya.
N'ihi na kọmputa a nwere a 16GB Ram na nchekwa 1TB n'ụdị draịvụ ike SSD. RAM nwere ikike dị elu nke na-enye anyị ahụmịhe onye ọrụ dị nro ma na-enyere kọmputa aka ịgba ọsọ ngwa ngwa. Ọ nwekwara ezigbo processor. Ya mere, anyị na-eche ihu na laptọọpụ nke na-apụta n'elu ndị ọzọ n'ihe gbasara ike na arụmọrụ dị mma. Na mgbakwunye na ịbụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ndị na-egwu egwuregwu n'ime ụdị nke laptọọpụ a na-enweghị sistemụ arụmọrụ.
Kọmputa nwere ibu nke 3,5 kg, n'ihi ya, ọ dị ka ụdị abụọ dị na ndepụta ahụ anyị kwurula na mbụ. Ọ nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri USB na HDMI anyị nwere ike iji, ọkachasị dị mkpa maka ntinye nke sistemụ arụmọrụ. N'ihi na ihe nlereanya a enweghị ihe ọkpụkpọ CD. Igwe ọkụ na laptọọpụ na-adọrọ adọrọ nke ukwuu, ọ bụ ezie na ọ dị mma ịmara na ọ bụ naanị na-acha ọcha. Ụdị dị ike, ngwa ngwa nke bụ nhọrọ zuru oke maka ndị chọrọ laptọọpụ nke ha ga-eji rụọ ọrụ na igwu egwu.
Ọ bụrụ na enwere akara kacha mma na ahịa laptọọpụ, ọ bụ HP. Ụlọ ọrụ nwere nkwado nke ndị ọrụ. N'ihi na ụdị ha bụ nkwa nke ịdị mma. Na mgbakwunye, anyị nwekwara laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ na katalọgụ ha. Ihe nlereanya a nwekwara a 14 anụ ọhịa ahụ na ihuenyo. Ogo dị mma maka ọrụ, egwuregwu, ma ọ bụ ihe nkiri. Ọ bụ nhọrọ nke pụtara ike ya. Na mgbakwunye na nnukwu nchikota RAM na nchekwa.
N'ime ya a 8GB RAM na 512GB SSD nchekwa. Yabụ na ọ bụ laptọọpụ na-enye anyị ahụmịhe onye ọrụ nwere oke mmiri. Na mgbakwunye na inwe ọtụtụ ebe nchekwa dị. Ogo nke ihuenyo ya bụ akụkụ nke a ghaghị ime ka ọ pụta ìhè, ebe ọ na-enye nnukwu mkpebi. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na anyị na-ekiri ihe nkiri ma ọ bụ na-egwu egwuregwu. Ebe ọ bụ na ọ na-enyere aka melite ahụmịhe onye ọrụ. Na mgbakwunye, keyboard nke laptọọpụ nwere ọkụ ndụ ndụ anyị nwere ike iji wee gbanyụọ mgbe ọ bụla anyị chọrọ n'ụzọ dị mfe.
Batrị bụ akụkụ dị mkpa na ihe nlereanya a. Ebe ọ bụ na o nwere a oge nke banyere 8 awa na nkịtị ojiji nke laptọọpụ. Yabụ na anyị nwere ike ịrụ ọrụ nke ọma n'ebughị ụgwọ ya. Nke a bụ ihe na-enye anyị udo nke uche, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị chefuo chaja. Ọ bụ laptọọpụ dị ike nke ukwuu, ikekwe otu n'ime ndị kachasị ike na ntụnyere a. E wezụga ịbụ a zuru ezu na vasatail nhọrọ. Ebe ọ bụ na ọ na-enye nnukwu arụmọrụ ma mgbe arụ ọrụ ma na-egwu egwu.
Anyị ji laptọọpụ a mechaa ndepụta a site na ika nke ọtụtụ n'ime unu maara. Nke abụọ nke ika na ntụnyere a. Ọ bụ laptọọpụ nwere ihuenyo 15,6 inch. Dị nnọọ otu nha ka ndị ọzọ nke kọmputa na ndepụta. Ihuenyo nwere mkpebi dị mma, nke na-enyere aka nke ukwuu mgbe ị na-egwu egwuregwu ma ọ bụ na-ekiri ihe nkiri. Ọ bụ ezigbo laptọọpụ maka ndị na-egwu egwuregwu.
Ihe nlereanya a nwere RAM 32 GB, nke kachasị na ntụnyere, yana ebe nchekwa diski ike 1 TB tinyere 1 TB SSD. Ka ọ were na-enye anyị ahụmịhe onye ọrụ dị oke mmiri. Na mgbakwunye na inwe nnukwu ohere iji chekwaa ụdị faịlụ niile dị na ya. Nke nwere ọtụtụ RAM na-enye anyị ohere iji ya mee ihe nke ọma ma nwee ike iji ya gwuo egwu. Ihe omume na-erikarị akụrụngwa. Ma na nke a, anyị na-eche ihu na laptọọpụ nke na-apụta maka ike ya na arụmọrụ dị mma.
E kwesịkwara icheta na ihe nlereanya a nwere ọtụtụ ọdụ ụgbọ mmiri, ma USB, HDMI ma ọ bụ kaadị agụ. Ya mere onye ọrụ nwere ọtụtụ ohere na nke a. Agbanyeghị, kọmpụta a enweghị onye na-agụ CD / DVD. Ihe na-egwu dị ka mmachi ma a bịa n'ịrụnye sistemụ arụmọrụ. Ọ bụghị oke arọ ihe nlereanya, dị n'okpuru 2KG. Ya mere njem ya dị nnọọ mma. N'okwu a, ahụigodo nwere ìhè agba asaa. Ụdị dị ike, nke na-enye arụmọrụ dị mma na nke kachasị mma ma ọ bụrụ na anyị na-achọ laptọọpụ egwuregwu.
Uru nke ịzụrụ laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ịzụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ. Mkpebi nke a kọwara site n'ọtụtụ ihe kpatara ya. Ebe ọ bụ na ụdị kọmputa a nwere usoro uru dị oke mkpa. Ya mere, anyị achịkọtala ụfọdụ n'ime uru ndị bụ isi nke laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ.
Ikekwe nke kachasị mkpa na ihe kpatara ọtụtụ ndị ọrụ ji ahọrọ ụdị kọmputa a. Dị ka enweghị usoro sistemụ na-eme ka ha bụrụ nhọrọ dị ọnụ ala karịa. Ọnụ ahịa ha dị obere karịa nke laptọọpụ nkịtị na ahịa. Ya mere, ị na-echekwa nnukwu ego. Na mgbakwunye, n'ọtụtụ ọnọdụ onye ọrụ agaghị emefu ego ma emechaa nweta sistemụ arụmọrụ.
Nhazi na nhazi
Ụdị kọmpụta ndị a dị ka kwaaji. Onye ọrụ nwere ike niile kpebie ihe ị chọrọ na kọmputa Ma gịnị kpatara na ọ bụghị. Ya mere, ha na-enye onye ọrụ ọtụtụ nhọrọ mgbe ha na-ahazi ya na mmasị ha. Ọ nweghị ihe na-abịa arụnyere dị ka ọkọlọtọ. Yabụ ị na-echekwa ọtụtụ ihe n'ihe gbasara bloatware. Onye ọrụ na-etinye ihe ọ chọrọ wee were na ọ dị mkpa na kọmputa.
Ọ bụ uru nwere njikọ chiri anya na nke gara aga. Dị ka onye ọrụ bụ onye na-ekpebi ụdị sistemụ ịwụnye. Ọ bụ ihe ọ na-ahọrọ n'onwe ya n'ihi na ọ hụrụ na ọ dị mma. Na mgbakwunye, enweghị sistemụ arụmọrụ na-enye gị ohere inyocha ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ. Ya mere, ị ga-apụ na nkịtị na isi ike nke laptọọpụ ọdịnala na-enye gị.
Ụdị na-ere laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
Ụfọdụ ụdị laptọọpụ nwere ụdị nke na-egbo mkpa nke ndị ọrụ ndị nweburu ikikere Microsoft Windows na-achọghị ịkwụ ụgwọ ego iji tinye ya, ma ọ bụ ndị na-achọghị ịrụ ọrụ na sistemu arụ ọrụ nke na-abịarute arụnyere na ga-ahazi. ha ga-arụnyekwa ya Sistemụ nrụọrụ kedu ihe masịrị gị. N'ọnọdụ ndị ahụ, ị ​​nwere ike ilekwasị anya na ụdị dị ka:
Ọ bụ otu n'ime ụdị na-agbakwunyere ọtụtụ kọmputa na-enweghị sistemụ arụmọrụ. Na mbụ, dị ka ndị ọzọ dị ka Dell, ma ọ bụ IBM, wdg, ha malitere ịgụnye ụfọdụ ụdị na Linux, ma nke nta nke nta, ha na-apụ n'anya maka nsụgharị ndị a na-enweghị OS nke mere na onye ọrụ bụ onye na-ahọrọ.
Can nwere ike ịhụkwu Akwụkwọ ndetu HP na njikọ na anyị ka hapụrụ gị.
Onye nrụpụta a ọkachamara na kọmpụta egwuregwu na-achọsikwa ike ire akụrụngwa na-enweghị sistemụ arụmọrụ nke na ọ bụ onye ọrụ na-ahọrọ nke ọ ga-etinye. Na mgbakwunye, sistemụ arụmọrụ na-achọkarị ịnwe ikikere n'efu, ọbụlagodi ndị nwe ya, yabụ na ọ nweghị isi na ha na-abịa na OS etinyegoro mbụ.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhụ ndị ọzọ MSI laptọọpụ, na njikọ ahụ ị nwere ike ịhụ ha.
Na asus laptọọpụ Ha ahọrọla inwe ezigbo ụdị nke nwere Linux (EndlessOS), yana FreeDOS ma ọ bụ, ozugbo, na-enweghị sistemụ arụmọrụ ọ bụla. Nke a ga-azọpụta ụfọdụ ego na OEM ma nye gị ohere ịhọrọ nke masịrị gị.
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na m zụtara laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ?
Kọmputa na-abịakarị na sistemụ arụmọrụ arụnyere na ndabara. Sistemu arụ ọrụ nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ laptọọpụ niile na-etinyekarị bụ Windows, mana enwerekwa nhọrọ nwere Linux etinyegoro mbụ ma ọ bụ nke nke. Apple, nke na-eji macOS. Laptọọpụ nwere sistemu arụrụ arụ ọrụ enweghị ike ịme ya na-akwụghị akwụkwọ ikike, nke pụtara na ha dị ntakịrị ọnụ karịa kọmpụta a na-ere. na-enweghị sistemụ arụmọrụ ọ bụla.
Ma gịnị na-eme ma ọ bụrụ na m zụtara kọmputa na-enweghị sistemụ arụmọrụ? Anyị amaralarị na anyị ga-akwụ obere ụgwọ maka na anyị ga-echekwa ego ikike, mana anyị ga-ahụkwa ọghọm ndị a:
N'ụzọ ezi uche dị na ya, anyị agaghị enwe ike ịme ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na i meghị ya anyị rụnyere sistemụ arụmọrụ. Maka ndị ọrụ novice na-arụnyebeghị sistemụ arụmọrụ, ịzụrụ kọmputa efu n'echiche a abụghị nhọrọ kacha mma.
Anyị ga-eme chọta anyị sistemụ arụmọrụ na anyị chọrọ ịwụnye. Isi okwu a dị ka nke gara aga, mana ọ bụghị. Anyị nwere ike ịhọrọ nkesa Linux ọ bụla ọ ga-arụ ọrụ nke ọma, a pụkwara ikwu otu ihe ahụ maka Windows 10 ma ọ bụrụ na anyị nwere CD nrụnye.
Ihe nwere ike ọ gaghị aga dịka a tụrụ anya ya mgbe echichichara. Ọ bụ ezie na sistemụ arụmọrụ ọgbara ọhụrụ na-eme ka ngwaike niile rụọ ọrụ, ma eleghị anya ọ dị ihe na-adịghị arụ ọrụ, nke a na-ahụkarị bụ njikọ HDMI. N'ọnọdụ ụfọdụ, a na-edozi nsogbu ahụ site n'ịchọ na ịwụnye onye ọkwọ ụgbọ ala maka akụrụngwa dị n'ime anyị.
Kedu OS ị ga-etinye na laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ?
A na-ere ọtụtụ laptọọpụ na sistemụ arụmọrụ Microsoft Windows etinyegoro nke ọma, na-esote macOS maka ụdị Apple, yana Google ChromeOS maka ụdị. Chromebooks. Kama, enwere ntakịrị nke gụnyere sistemụ arụmọrụ GNU / Linux etinyegoro, dị ka Slimbook, System76, Librem, wdg, yana ndị gụnyere FreeDOS ma ọ bụ naanị. ha enweghị sistemụ arụmọrụ ọ bụla arụnyere (mgbe ụfọdụ a na-akpọ Non-Os ma ọ bụ Free OS, ka ọ ghara inwe mgbagwoju anya na FreeDOS).
Ndị nke FreeDOS Ha na-enye OS dị mfe na ọnọdụ ederede ka ha nwee ike ịrụ ọrụ ndị bụ isi, iji rụchaa wụnye sistemụ arụmọrụ zuru oke, dịka ọ dị na ndị na-enweghị OS. N'ọnọdụ ọ bụla, ịnwere ike ịwụnye ọtụtụ sistemụ arụmọrụ, n'agbanyeghị na abụọ kachasị ewu ewu bụ:
Ọ bụ nhọrọ kachasị amasị nke ọtụtụ, ebe ọ bụ sistemụ arụmọrụ nwere nkwado kachasị mma maka ngwanrọ azụmahịa na ngwaike. Ọ dị mkpa karịsịa maka Ịgba Cha Cha, ebe ọ bụ na ọtụtụ egwuregwu vidiyo dakọtara na sistemụ arụmọrụ a.
Naanị ihe ị ga-atụle na nhọrọ a bụ na ọ bụrụ na ị nwere kọmputa na-abụghị OS, Free OS, ma ọ bụ FreeDOS, ị ga-enwe diski ike na-enweghị usoro ma ọ bụ nkebi na usoro a maara nke ọma, nke onye ntinye Windows nwere ike mata. . N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị nwere sistemu dị ka OS na-adịghị agwụ agwụ, ChromeOS, ma ọ bụ Linux yiri ya, ọ ga-ejikarị usoro nke Windows installer na-agaghị amata, ị ga-ahazikwa ya na mbụ n'ụdị a maara dị ka NTFS site na ndụ dị otú ahụ. dị ka Gparted ma ọ bụ ihe yiri ya.
Ụfọdụ ndị na-achọ usoro ọrụ siri ike, ntụkwasị obi na nchekwa, yana nkwanye ùgwù nke nzuzo, na-ejedebe iji nkesa nke ụdị a. Ọzọkwa ụfọdụ ndị mmepe na-ahọrọ ya maka ohere ọ na-enye ohere.
Kedu ụzọ ọ bụla, ọ bụ nnukwu nhọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ọzọ. Na mgbakwunye, ọ ga-amata usoro ọ bụla gara aga nke nchekwa nchekwa ga-enwe ike ijikwa nkebi sitere na installer.
Ị nwekwara ike ịwụnye sistemụ arụmọrụ ndị ọzọ, dị ka FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, Android x86, ReactOS, na ogologo wdg. Ọ bụ ezie na sistemụ ndị a pere mpe, mgbe ụfọdụ ha enweghị nkwado ngwanrọ / ngwaike kacha mma dị, yana ị nwere ike banye n'ime nsogbu ụfọdụ ma ọ bụ enweghị ndakọrịta.
Ị nwere ike ịnwale macOS site na iji usoro Hackintosh, n'agbanyeghị na ọ na-esiwanye ike site na Apple, ọbụna karịa ugbu a na ha dabere na ibe ha na ARM.
Otu esi etinye OS na kọmpụta na-enweghị sistemụ arụmọrụ
N'ọnọdụ ndị a, ọ dabere na sistemụ arụmọrụ ị ga-etinye. Ọ bụrụ na ị mechaa họrọ tinye Windows 10 na kọmputa gị, Usoro adịghị mgbagwoju anya. Ihe ndị ọrụ ga-eme bụ ibudata Windows 10 ISO. ISO a dị na ụlọ ọrụ weebụsaịtị.
Anyị kwesịrị bufee ISO na ebe nchekwa USB wee fanye kwuru USB ebe nchekwa na kọmputa na-enwe ike na-agba ọsọ ya na ya. Ya mere, ka anyị na-agba ọsọ a Windows 10 ISO n'okpuru na echichi usoro kwesịrị ịmalite. Onye ọrụ agaghị eme ọtụtụ ihe ọzọ, naanị soro usoro nke usoro a na-akara.
Otu nzọụkwụ na-akpatakarị nsogbu bụ mgbe ị rịọrọ igodo ngwaahịa. Ebe ọ bụ na e nwere ikpe nke site n'ịkwụsị nzọụkwụ a, ọ ga-ekwe omume ịwụnye Windows 10. Enweghị nsogbu, ọ bụ ezie na na tiori naanị ndị ọrụ na-aga na nsụgharị mbụ nke sistemụ arụmọrụ nwere ike ime ya n'enweghị mkpa ikike.
Ya mere, n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị mkpa ka ị kwụsị ịzụrụ ikikere Windows 10 tupu ịmalite usoro a. Ikikere dị na ụlọ ahịa Microsoft nke ya. Ma gbalịa na-eme usoro ahụ ọtụtụ oge tupu ịmalite ịzụrụ akwụkwọ ikike.
Ọ bụrụ na ị na-eche echiche ịwụnye Linux, usoro a bụ otu. Ị ga-ebudata ISO nke ụdị kachasị ọhụrụ dị ma soro usoro nke usoro ahụ gosipụtara. Ọ na-enwekarị nghọta ma enwerekwa akwụkwọ ntuziaka ndị na-enyere ndị ọrụ aka ịwụnye sistemu a na laptọọpụ ha n'enweghị sistemụ arụmọrụ.
Enwere m ike ịzụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ wee jụọ onye ọrụ nka ka ọ wụnye ya?
Mgbe ụfọdụ ị nwere ike. Ụlọ ahịa na-ere anyị laptọọpụ nwere ike inye anyị ohere nke ịwụnye sistemụ arụmọrụ na kọmputa nke a na-ere na mbụ na-enweghị ya, ma ebe a anyị ga-abanye n'ime nsogbu abụọ. Nke mbụ na nke doro anya bụ nke ahụ anyị ga-atụfu isi uru ịzụta kọmputa na-enweghị sistemụ arụmọrụ, ya bụ, ego. Ihe anyị ga-echekwa na akwụkwọ ikike bụ onye ọkachamara ga-ana ya, yana ikekwe karịa ma ọ bụrụ na ọ gbakwụnye ọrụ na akwụkwọ ọnụahịa ya.
N'aka nke ọzọ, onye na-ahụ maka nkà na ụzụ nwere ike ịkpa àgwà ọma ma na-ana anyị obere ego, nke ga-eme ka anyị nọgide na-echekwa ego ụfọdụ, ma ọ gaghị ekwe omume na ihe o nwere n'aka ya bụ sistemụ arụmọrụ pirated enweghị ike iwepụ ma. N'okwu a, anyị nwere ike ịnwe nsogbu inye ikike n'ọdịnihu. Nke ọ bụla, ọ bụghị echiche kacha mma Gwa onye ọrụ nka ka ọ wụnye sistemụ arụmọrụ na kọmputa nke na-abịa na-enweghị ya.
Ọ bara uru ịzụta laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ
para ndị ọrụ mbido Ma na-enweghị nkà na ụzụ ọmụma, mba, ebe ọ bụ na ha ga-amụta ịwụnye sistemụ na hazie ya onwe ha, ma ọ bụ na-ejedebe na-enyefe na laptọọpụ n'aka ọkachamara ime ya.
Kama, na ndị ọrụ dị elu karịa Ndị na-anwa anwa ịhazi na wụnye sistemụ arụmọrụ ha ga-enwe ike ịchekwa akụkụ nke akwụkwọ ikike, wee họrọ sistemụ na mbipụta ha chọrọ ịwụnye. Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ha akwụlarị nkwado ma ọ bụ akwụkwọ ikike maka otu, ha agaghị akwụ ụgwọ maka ikike ọzọ nke usoro ha agaghị eji.
por na-arụ ọrụWere ya na ị nwere Microsoft Windows 10 Pro License, ma ọ bụ na ịchọrọ ịwụnye Ubuntu na laptọọpụ ọhụrụ gị. N'okwu ahụ, gịnị kpatara ịkwụ ụgwọ maka PC nwere ikikere ụlọ Windows 10? Chekwaa nke ahụ ka mma wee wụnye sistemụ arụmọrụ kachasị amasị gị n'onwe gị.
Laptọọpụ dị ọnụ ala » Tipo » Laptọọpụ na-enweghị sistemụ arụmọrụ